Iindaba - Ukusukela nge-5 kaFebruwari ukuya kwi-20, siza kubhiyozela umnyhadala wasentwasahlobo ngeli xesha lokugqibela. Uxolo ngayo yonke into nge-inconveninet kuwe kwaye nceda ukhululeke ukunxibelelana nam ukuba une-somethign engxamisekileyo ukufumana impendulo. Ndingathanda ukuthatha eli thuba ndinqwenelele wena kunye neentsapho zakho konke okona kulungileyo kunyaka omtsha onwabileyo nolusempilweni wamaTshayina!
Iivili zeNdebe yeDayimane
Amacwecwe e-Diamond Gring
Amacwecwe Ukusila Htc
Ii-Disc zokugaya ii-PCD
Idayimani yabona iincakuba
Amabhithi e-Sintered Diamond Router
Iibhithi zeGeological Drill
Ukusukela nge-5 kaFebruwari ukuya kwi-20, siza kubhiyozela umnyhadala wasentwasahlobo ngeli xesha lokugqibela. Uxolo ngayo yonke into nge-inconveninet kuwe kwaye nceda ukhululeke ukunxibelelana nam ukuba une-somethign engxamisekileyo ukufumana impendulo. Ndingathanda ukuthatha eli thuba ndinqwenelele wena kunye neentsapho zakho konke okona kulungileyo kunyaka omtsha onwabileyo nolusempilweni wamaTshayina!
Umnyhadala weNtwasahlobo ka-2020
Ukususela ngoFebruwari 5th ukuya ku-20th , Siza kubhiyozela umthendeleko wasentwasahlobo ngeli xesha lokugqibela. Uxolo ngayo yonke into nge-inconveninet kuwe kwaye nceda ukhululeke ukunxibelelana nam ukuba une-somethign engxamisekileyo ukufumana impendulo. Ndingathanda ukuthatha eli thuba ndinqwenelele wena kunye neentsapho zakho konke okona kulungileyo kunyaka omtsha onwabileyo nolusempilweni wamaTshayina!
Enkosi ngothando lwakho oluhle kunye nenkxaso!
Iibhendi zendlela yedayimani（itekhnoloji yethu entsha）
CNC umzila Bit Cutting Izixhobo Diamond ukrola Amabhanti Kuba Stone Marble Kwaye Granite
Ngenzuzo yokuba ezibukhali, ukumelana lingonakali ngcono, nisondelelane womelele kwaye akukho lula ukuba spall off, yeyona nto intle izixhobo shank besila, besila ingasetyenziswa njengesangqa yangaphakathi, erhangqiweyo, umsele, arc, ikhowuni kunye nezinye umphezulu ezizodwa.
Umahluko weemveliso ezi-sintered, ezi-electroplated kunye nebrazed:
1) Elona xesha lide lokuphila
2) Ukwamkelwa kwemakethi ephezulu
I-3) Sebenzisa ngokubanzi uluhlu: Iyafumaneka ukusika i-microcline, ithayile, ikhonkrithi, igranite, imabhile kunye neglasi
2. Yonyulwe ngombane
1) Ukuchaneka okuphezulu
2) Ubukhali obungcono kuneBrazed
I-3) Iyafumaneka ngokusika i-marble kunye neglasi
4) Akukho kukhutshwa
3. Ifakwe iBrazed
1) Itekhnoloji entsha, ebaluleke ngakumbi kunangaphambili
2) Ixesha elide lobomi kunokuba likhethiweyo
3) Ukusebenza okuphezulu kunokuba sintered
4) Kulungile kuzo zombini ukusika okomileyo kunye nokusika okumanzi
5) Iyafumaneka ukusika imarble kunye nesinyithi
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi, singaya kwiAlibaba yethu
Idilesi:No.1719, Road Changjiang, District Lianxi, Jiujiang City, kwiPhondo Jiangxi.